Fri, Jul 10, 2020 at 7:04pm
नयाँदिल्ली, ३० फागुन भारतले पाकिस्तानमा आश्रय लिइरहेको लडाकू समूहका नेता मसूद अजहर र उनले नेतृत्व गरेको जैस–ए–मोहम्मद समूहलाई कालोसूचीमा राख्ने राष्ट्रसंघको प्रस्तावलाई चीनले अस्वीकृत गरेको भन्दै “निराशा” व्यक्त गरेको छ । यही समूहले फेब्रुअरी १४ मा भारत नियन्त्रित काश्मिरको पुलवामा बिस्फोट गराउँदा ४० जना भारतीय सिपाहीको मृत्यु भएको थियो । यो घटना काश्मिरी व्यक्तिले गरेको बताइए पनि पाकिस्तानमा आश्रय लिएको जैस–ए–मोहम्मदले घटनाको..
भारतीय सांसदले नेपालीलाई अपमान गर्दै ट्वीटरमा यस्तो लेखेपछि ...
काठमाडौँ, २८ फागुन भारतको आम आदमी पार्टीकी सांसद अल्का लाम्बाले नेपालीलाई अपमानित गर्दै ट्वीट गरेकी छिन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई लक्षित गर्दै उनले ट्वीटरमा लेख्दा नेपालीलाई अपमान गरेकी हुन् । उनले आफ्नो ट्वीटमा लेखेकी छिन् – प्रिय भारतवासी, कृपया यसपटक प्रधानमन्त्री चुन्नुहोला । चौकीदार त नेपालबाट पनि मगाउन सकिन्छ । नेपालका चौकीदार चोर हुँदैनन् । उनले यस्तो ट्वीट गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा उनको..
भारतको लोकसभा निर्वाचन ७ चरणमा हुने, मतदाता ९० करोड
नयाँ दिल्ली, भारत, २६ फागुन : भारतीय लोकसभाको निर्वाचनको मिति आइतबार घोषणा गरिएको छ । भारतीय निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त सुनिल आरोडाले आगामी अप्रिल ११ पछि मे १९ सम्म विभिन्न सात चरणमा निर्वाचन गर्नेगरी निर्वाचनको मिति सार्वजनिक गर्नुभएको हो । भारतीय निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त सुनिल आरोडाले आगामी अप्रिल ११ पछि मे १९ सम्म विभिन्न सात चरणमा निर्वाचन गर्नेगरी निर्वाचनको मिति सार्वजनिक गर्नुभएको..
भारतमा निर्वाचनको मिति आज घोषणा हुने, देशभर 'तरंग'
नयाँ दिल्ली, २६ फागुन भारतमा हुन लागेको आम निर्वाचनका लागि आइतबार मतदानको मिति घोषणा हुने भएको छ । विश्वकै सवै भन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक भारतमा हुने राष्ट्रिय निर्वाचनमा अर्बौ मतदाताले सहभागीता जनाउने छन् । निर्वाचन आयोगले आइतबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेको र सोही सम्मेलनमा निर्वाचनको मिति सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ । भारतको संविधान अनुसार तल्लो सदनमा ५४३ जना सांसद निर्वाचित हुने छन् ।..
पाकिस्तानमा प्रतिबन्धित सङ्गठनका १ सय २१ जना पक्राउ
इस्लामावाद, २३ फागुन प्रतिबन्धित विभिन्न सङ्गठनमा आवद्ध १२१ जनालाई पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मीहरुले पक्राउ गरेका छन् । गत चार दिनको अवधिमा उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको सरकारी अधिकारीहरुलाई उद्धृत गर्दै स्थानीय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले प्रतिबन्ध लगाएका सङ्गठनका व्यक्तिहरु पक्राउ परेको स्थानीय उर्दु टेलिभिजन सामाले जनाएको छ । गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार पक्राउ परेका व्यक्तिहरु प्रतिबन्धित विभिन्न सङ्गठनमा निकै सक्रिय थिए । देशको सुरक्षा..
ग्रेनेड विस्फोट हुँदा कस्मिरमा २५ जना घाइते
एजेन्सी, २३ फागुन भारतको जम्मू–कश्मीर राज्यको जम्मूमा ग्रेनेड विस्फोट हुँदा कम्तीमा २५ जना घाइते भएको बीबीसीले जनाएको छ । बिहीबार बिहान पौने बाह्र बजे विस्फोट भएको प्रहरीले जनाएको छ । जम्मू डिभिजनका प्रहरी महानिरीक्षक एमके सिन्हाले केही संदिग्ध व्यक्तिले बसपार्कमा रहेको बसबाट बाहिर ग्रेनेड बम फ्याँकेको बताएका छन् । त्यो बम विस्फोट हुँदा बसपार्कमा भएका व्यक्ति घाइते भएका हुन् । सुरुवाति अनुसन्धानअनुसार..
भारत-पाक सीमा क्षेत्रमा गोलाबारी जारी, पहिलाभन्दा शान्त
नयाँ दिल्ली, २३ फागुन : भारत र पाकिस्तानको सीमा क्षेत्रमा अझै पनि गोली हानाहान जारी रहेको भारतीय पक्षले जनाएको छ । भारतीय सेनाका उच्च अधिकारीहरूले दुवै पक्षबाट एक अर्काप्रति गोलावारी जारी राखे पनि कुनै मानवीय क्षति भने नभएको बताएका छन् । उनीहरूले गत चौबिस घण्टामा भएका गोली हानाहानमा भारतीय पक्षमा कुनै मानवीय क्षति नभएको बुधबार दाबी गरेका हुन् । गोली हानाहान भए पनि मानवीय..
इमरान खानले भने - म नोबेल पुरस्कारका लागि योग्य छैन
इस्लामाबाद, २१ फागुन : एएनआई० पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले आफु नोबेल शान्ति पुरस्कारका लागि योग्य नभएको सोमबार बताउनु भएको छ । स्थानीय जनताको चाहना अनुसार काश्मिर समस्या समाधान गर्नेलाई व्यक्ति सो पुरस्कारका लागि योग्य हुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभएको छ । उहाँले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ, “म नोबेल शान्ति पुरस्कार पाउन योग्य छैन । त्यसका लागि योग्य त्यो हुनेछ जसले काश्मिरका जनताको इच्छा..
पाकिस्तानमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको सम्भावना अझै अन्यौलमा !
लाहोर, पाकिस्तान ९ फागुन लाहोरमा १० वर्षअघि श्रीलङ्काली क्रिकेट टोलीमाथि लडाकू समूहले गरेको साङ्घातिक आक्रमणबाट आफूमाथि लागेको घाउचोट देखेर अम्पायर अहसान रजालाई अहिले पनि शरीर काँप्छ । हाल ४४ वर्ष पुगेका रजा भाग्यशाली थिए । उनी लडाकूले प्रहार गरेको गोली, ग्रिनेड र रकेट लन्चरबाट भाग्यवश बाँच्न सफल भएका थिए । यो घटनाले उनको जीवन मात्र बदलिएन पाकिस्तानी क्रिकेटको परिदृश्य नै फेरिएको छ । दोस्रो..
“पाकिस्तानी सेना नरेन्द्र मोदीले भारतीय निर्वाचन जितून् भन्ने चाहन्छ !”
-बिबिसी टिप्पणी : भारतले पाकिस्तानभित्र पसेर हवाई आक्रमण गरेपछि दुई देशबीच तनाव चुलिएको छ। पाकिस्तानको राजनीतिक र सैन्य नेतृत्वले भारतको आक्रमणको उत्तर उचित समय र ठाउँमा दिने चेतावनी दिएको छ। तर के पाकिस्तानको सेनाले भारतविरुद्ध कुनै कारबाही गर्न सक्छरु प्रस्तुत छ, दक्षिण एशियाको सुरक्षा मामिला विशेषज्ञ प्राध्यापक क्रिस्टिन फेयरको धारणा... यो वास्तवमा ठूलो साहसिक आक्रमण हो। पाकिस्तानी वायुसेनाको बाध्यता के हो भने ऊसँग भन्ने..
भारत-पाकिस्तान तनाव बढ्दा बाँकी विश्व किन चिन्तित हुन्छ?
काठमाडौँ, १८ फागुन कश्मीर विश्वमा सबैभन्दा बढी सैनिकीकृत क्षेत्रमध्ये एक हो। त्यहाँ भारत र पाकिस्तानजस्ता दुई पारमाणु-शक्तिसम्पन्न देशबीच अतिसम्वेदनशील सीमारेखा पनि छ। गतसाता भारत प्रशासित कश्मीरमा कम्तीमा ४६ सुरक्षाकर्मीको ज्यान जानेगरी एउटा आत्मघाती आक्रमण भयो। भारतीय सुरक्षा बलमाथि भएको यो एउटा ठूलो रक्तपातपूर्ण आक्रमण थियो। पछि भएका भिडन्तमा सुरक्षाकर्मी, सन्दिग्ध लडाकु र गैरसैनिकको पनि मृत्यु भयो। यी घटनाहरूले त्यस क्षेत्रलाई पुन: अस्थिर पार्न सक्ने..
पाकिस्तानले ९ बजे राती छाड्यो भारतीय विमानचालक अभिनन्दनलाई
पञ्जाव भारत, १७ फागुन । पाकिस्तानले आफ्नो कब्जामा भएका भारतीय वायुसेनाका विमानचालक अभिनन्दन वर्तमानलाई शुक्रबार राती ९ बजेतिर मुक्त गरेको छ। कब्जामा रहेका ती पाइलटलाई पाकिस्तानले दिउँसो नै भारतलाई सुम्पिएको बताएतापनि उसले अबेर मात्रै पञ्जाबको बाघा बोर्डरबाट सुम्पिएको हो । पाकिस्तानले एउटा भारतीय लडाकु विमानलाई बुधवार आफ्नो भूमिमा खसालिदिएको थियो भने सो विमानका चालक अभिनन्दन वर्तमान त्यसपछि उसको कब्जामा परेका थिए । उनलाई विमानमा..
पाकिस्तानले भारतीय पाइलट फिर्ता गर्नुको रहस्य यस्तो
काठमाडौं,१७ फागुन भारतले पाकिस्तानी सेनाले कब्जामा लिएका भारतीय वायुसेनाका विमानचालक अभिनन्दन वर्तमानलाई मुक्त गर्ने र स्वदेश फिर्ता पठाउने घोषणाको स्वागत गरेको छ। भारतीय सेनाका अधिकारीहरूले उक्त कदमबाट आफूहरू 'निकै हर्षित' भएको बताएका छन्। उनलाई शुक्रवार अपराह्ण दुवै देशका पन्जाब राज्यको वाघा-अटारी सीमामा भारतलाई हस्तान्तरण गरियो । तर पाकिस्तानका गतिविधिहरूप्रति आफू सतर्क रहेको भारतीय सेनाले जनाएको छ। कश्मीर क्षेत्रमा तनाव बढेसँगै अहिले नियन्त्रणरेखाका दुवैपट्टि दशौँ हजार सैनिकहरू..
काठमाडौं, १७ फागुन पाकिस्तानले पक्राउ गरेका भारतीय वायु सेनाका विंग कमाण्डर अभिनन्दन वर्तमानलाई भारतलाई बुझाएको छ । पाकिस्तानले पाइलट वर्तमानलाई इस्लामाबादस्थित भारतीय उच्चायोगलाई बुझाएको हो । अब वर्तमानले अपरान्ह ३–४ बजेतिर अटारी–बाघा बोर्डरको चेकपोस्ट पार गरेर भारत प्रवेश गर्ने हिन्दुस्तान टाइम्सले लेखेको छ । पाकिस्ताले शान्तिको लागि आफैंले प्रयास सुरु गर्ने घोषणासहित पाइलट वर्तमानलाई रिहा गरेको हो । अमृतसरमा सयौं भारतीयहरु अभिनन्दनलाई..
भारत-पाकिस्तान तनाब ! शेयर बजारमा तीब्र उतार-चढाव
मुम्बई, भारत, १५ फागुन : भारत र पाकिस्तानबीच देखिएको तनाबका कारण बुधबार बिहान भारतीय शेयर बजारमा एक्कासी गिरावट आएको छ । लगानीकर्ताहरूले सीमाना क्षेत्रमा भएको तनाव लामो नरहने विश्वास गरेका छन् । बुधबार दिउसो पाकिस्तानी विमानले भारत प्रशासित काश्मिरको आकाशमा छिरेको भन्दै भारतीय लडाकू विमानले प्रतिरक्षा गरेपछि पाकिस्तानी विमान फर्केको भारतीय अधिकारीको दावी गरेका छन् । राष्ट्रिय स्टक एक्सचेन्ज निफ्टी ५० मा २९..
भारत-पाकिस्तान तनाब: भारत भित्र छिरे पाकिस्तानी लडाकु विमान
एजेन्सी, १५ फागुन भारत-पाकिस्तान तनाब बढीरहेकै बेला पाकिस्तानी लडाकु विमानहरु भारत प्रवेश गरेका छन्। बुधबार बिहानै पाकिस्तानी विमानहरु सीमा पार गर्दै भारत प्रवेश गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । मंगलबार भारतले पाकिस्तान प्रवेश गरेर त्यहाँको उग्रवादी समूह जैस–ए–मोहम्मद विरुद्ध आक्रमण गरेको थियो। आफ्नो सीमाभित्रै छिरेर भारतले आक्रमण गर्न थालेपछि बुधबार पाकिस्तानी विमानहरुले भारतको नियन्त्रित रेखा पार गरेका हुन। पाकिस्तानी एफ–१६ लडाकु विमान भारतीय..
भारत र पाकिस्तानका सेनाबिच भिडन्त, भारतीयसेनाको विमान दुर्घटना
एजेन्सी, १५ फागुन नियन्त्रण रेखाका विभिन्न क्षेत्रमा भारत र पाकिस्तानका सुरक्षाकर्मीबिच गोली हानाहान भएको छ । सीमा क्षेत्रको कश्मीरसँग जोडिएको नियन्त्रण रेखामा लागु भएको युद्ध विराम उल्लंघन गरेको आरोप भारत र पाकिस्तानले एक अर्कामाथि लगाएका छन् । मंगलबार बेलुका कोटली सेक्टरमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर चारजनाको ज्यान गएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले दाबी गरेका छन् । ज्यान गुमाउनेमा तीन महिला र एक बालक रहेका छन्..
सातजनालाई मात्र थाहा थियो हमलाको समय तालिका..
नयाँदिल्ली, भारत । फागुन १५ । द हिन्दुस्तान टाइम्स पत्रिकाका अनुसार पाकिस्तानको बालाकोटमामा चरमपन्थी जैश(ए(मोहम्मदको तालिम केन्द्रमा मङ्गलवार बिहान भएको भारतीय वायुसेनाको आक्रमणको समयबारे सात जनालाई मात्र थाहा थियो। बिहान तीन बजेर ४० मिनेटदेखि ५३ मिनेटसम्म भएको हमलामा मिराज लडाकु विमान प्रयोग भएको पत्रिकाले लेखेको छ। भारत प्रशासित कश्मीरको पुलवामामा सुरक्षाकर्मीमाथि भएको आत्मघाती आक्रमणपछि भारतले पक्कै पनि कुनै कारबाही गर्ने ठानिएको थियो। को हुन्..
भारतलाई पाकिस्तानले 'जवाफ' दिने, युद्धबाट समाधान भेटिएला ?
इस्लामावाद, १४ फागुन भारतीय हवाई सैन्यले भारत–पाकिस्तान सीमा (लाइन अफ कन्ट्रोल) उल्लङ्घन गरी पाकिस्तान–अधीनस्थ काश्मिर क्षेत्रमा भारतीय सैनिक विमान प्रवेश गरेको पाकिस्तानले जनाएको छ । पाकिस्तानका विदेशमन्त्री शाह महमूद कुरैशीले भारतले पाकिस्तानी भूमिमा आक्रमण गरेर पाकिस्तानको सम्प्रुभताको उल्लङ्घन गरेको र त्यसको उचित जबाफ दिइने बताएका छन् । पाकिस्तानी सेनाका प्रवक्ता मेजर जनरल असिफ गफुरले भारतीय सैनिक विमानले मङ्गलबार बिहान बिना अनुमति पाकिस्तानी सीमाभित्र..
भारतीय लडाकु विमान र पाकिस्तानी सेनाबिच टकराव, बमको वर्षा !
काठमाडौँ, १४ फागुन भारतीय वायु सेनाको फाइटर विमानले पाकिस्तानको बालाकोट, चकोठी र मुजफ्फरावादमा रहेको आतंकवादी अखडामा १००० किलो बम खसालेर ध्वस्त बनाएको दाबी गरेको छ । मंगलबार बिहान गरिएको उक्त आक्रमणको पाकिस्तानले पनि पुष्टि गरेको छ । भारतीय वायुसेनाले भारत-पाकिस्तान नियन्त्रण रेखा एलओसीको उल्लङ्घन गरेको दाबी पाकिस्तानी सेनाले गरेको छ । पाकिस्तानी सेनाका प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफुरले ट्वीटमा लेखेका छन् - मुजफ्फराबाद सेक्टरबाट..
बांग्लादेशमा विमान अपहरण प्रयास गर्ने व्यक्ति मारिए
काठमाडौं, १३ फागुन । बांग्लादेशको सरकारी वायुसेवा कम्पनी विमानद्वारा सञ्चालित एउटा यात्रुवाहक जेट विमानको अपहरणको प्रयास भएपछि चितगोंग शहरमा उक्त विमानको आपतकालीन अवतरण गराइएको छ। राजधानी ढाकाबाट दुबईतर्फ उडिरहेको सो विमान फ्लाइट बीजी १४७ मा १ सय ४२ जना यात्रु सवार थिए। सन्दिग्धलाई गोली हानिएको र उनको मृत्यु भएको बताइएको छ। ती सन्दिग्धलाई आत्मसमर्पण गर्न भनिएको तर नमानेपछि गोली हानिएको सैनिक सूत्रले जनाएको..
ढाका, बङ्गलादेश, १२ फागुन : बङ्गलादेशबाट दुबईका लागि उडेको विमान बङ्गलादेश एअरलाइन्सका चालकदलका सदस्यले जहाज अपहरण गर्ने प्रयासलाई विफल पारिदिएका छन् । आइतबार एक जना सन्दिग्ध व्यक्तिले विमानको ककपिटमा जबरजस्ती छिर्न खोजेको तर चालक दलका सदस्यले उक्त प्रयासलाई विफल पारेको बताइएको छ । बङ्गलादेशी सेनाको इन्टर सर्भिस पब्लिक रिलेसन ९आइएसपिआर० का अधिकारीका अनुसार बिजी १४७ नम्बरको दुबईका लागि भएको बोइङ ७३७ विमानलाई शाह..
विषाक्त मदिरा सेवनबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या सय बढी, २०० विरामी
आसाम, भारत, १२ फागुन : भारतको पूर्वी–उत्तर राज्य आसाममा विषाक्त मदिरा सेवन गर्दा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १०० भन्दा माथि पुगेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । दुई सयभन्दा बढी व्यक्तिलाई उपचारका लागि एउटा अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । स्थानीय सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित विवरणहरूका अनुसार मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या बढ्न सक्ने बताइएको छ । दुई हप्ताअघि अरू दुई राज्य उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डमा पनि विषाक्त मदिराका..
विषाक्त मदिरा पिउँदा भारतमा २५ चिया मजदुरको मृत्यु
गुवाहाटी, भारत, १० फागुन : भारतमा विषाक्त मदिरा सेवन गरेकाले १५ महिला सहित २५ जनाको मृत्यु भएको छ । देशको उत्तरपूर्वी राज्य असाममा पर्ने ठाउँमा भएको घटनामा मदिरा सेवनकर्ताहरुको सेवन गरेको केहीबेरमै निधन भएको प्रहरी अधिकारीहरुले जनाएका छन् । भारतको उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डमा गत दुई हप्ताभित्रमा विषाक्त मदिराका कारण झण्डै एक सय जनाको मृत्यु भएको छ । पछिल्लो घटनामा परी मृत्यु भएका मध्ये..
पाकिस्तानमा अविरल वर्षाबाट २८ को मृत्य
इस्लामाबाद, १० फागुन पाकिस्तानमा केही दिनयता परेको अविरल वर्षाको कारण देशका विभिन्न भूभागमा गरी कम्तीमा पनि २८ व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । स्थानीय सञ्चारमाध्यमले शुक्रबार दिएको जानकारीअनुसार यसै हप्ताको शुरुबाट परेको अविरल वर्षा, आँधी र भीषण हिमपातको कारण ती २८ व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । पाकिस्तानको दक्षिणीपश्चिमी प्रान्त बलुचिस्तानममा मुख्यमन्त्री जामभ कमाल खानले सञ्चारमाध्यमलाई सो प्रान्तमा अविरल वर्षापछि आएको बाढीका कारण चार व्यक्तिको..
बांग्लादेशमा भीषण आगलागी, मृतकको सङ्ख्या ७० पुग्यो [फोटो सहित]
काठमाडौं, ९ फागुन बांग्लादेशको राजधानी ढाकामा भएको आगलागीमा परेर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ७० पुगेको अधिकारीहरूले जनाएका छन् । आगो नियन्त्रणमा लिन ३७ वटा दमकल त्यहाँ पुगेका थिए । उनीहरूका अनुसार थुप्रै घाइते भएका छन् । घाइतेमध्ये केही गम्भीर रूपमा जलेका छन् । राती १० बजपछि आगो लागेको हो । राजधानीको पुरानो र ऐतिहासिक शहरी इलाकाको चोकबजारको एउटा भवनबाट आगो सुरू भएको थियो । उक्त भवनमा रासायनिक..
बांग्लादेशमा भीषण आगलागी, अहिलेसम्म ६० जनाको मृत्यु
काठमाडौं, ९ फागुन । बांग्लादेशको राजधानी ढाकामा भएको आगलागीमा ६० जनाको मृत्यु भएको छ। अधिकारीहरूका अनुसार थुप्रै घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये केही गम्भीर रूपमा जलेका छन्। अग्नि नियन्त्रण सेवाका महानिर्देशक अली अहमद खानले बीबीसीलाई बताए अनुसार राति १० बजपछि आगो लागेको हो। त्यहाँबाट १२ जनाको शव निकालिएको छ। मृतकको सङ्ख्या बढ्न सक्छ। राजधानीको पुरानो शहरी इलाकाको चोकबजारको एउटा भवनबाट आगो सुरू भएको थियो।..
भारतीय अर्बपति अनिल अम्बानीलाई जेल सजाय हुने सम्भावना
काठमाडौं, ८ फागुन । भारतका एकजना अर्बपति व्यवसायी अनिल अम्बानीको रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (आरकम) र एउटा विशाल दूरसञ्चार कम्पनी एरिक्सनबीचको व्यापारिक सम्झौता भंग हुनपुगेपछि उनले जेल सजायको सामना गर्नु पर्ने भएको छ। एरिक्सनले आरकमको नेटवर्क व्यवस्थापन र संचालन गर्ने उक्त सम्झौताको शर्त बमोजिम साढे पाँच अर्ब भारतीय रूपैया आरकमबाट भुक्तानी पाउन बाँकी छ। उनलाई अदालतको आदेशको अवहेलना गरेको अभियोगमा दोषी ठहराउँदै उक्त रकम भुक्तानी..
फेरि भारत–पाकिस्तान युद्ध हुने सम्भावना कति ? यस्तो छ हिसाब-किताब
एजेन्सी, ८ फागुन जसरी पाकिस्तानी जनताले आफ्नो मुलुक पाकिस्तानालाई हेर्छन, बाँकी विश्वसले पनि त्यसैगरी हेर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। यसैगरी जसरी भारतीय जनताले भारतलाई हेर्छन्, बाँकी विश्वले पनि त्यसैगरी भारतलाई हेर्नुपर्छ भन्ने आवश्यक छैन्। जनताको भावना, संचारमाध्यमको प्रस्तुती, नेताको मुखबाट निस्किने टिप्पणी आफ्नो ठाउँमा छ, तर सरकारले कुनै पनि एक्शन लिनुपूर्व दश प्रकारका यस्ता चीनका विषयमा सोच्नुपर्छ। आरोप प्रत्यारोपबाट के फाइदा ? अब पुलवामामा घातक आक्रमणलाई..
भारतलाई पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको चेतावनी : 'हामीपनि हेरेर बस्दैनौं'
एजेन्सी, ७ फागुन कस्मिरमा भएको आतंककारी हमलाका विषयमा पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले पहिलो पटक मुख खोलेका छन् । भारतले पाकिस्तानमाथि हमलाको आरोप लगाइरहदा इमरानले बिना प्रमाण आरोप लगाइएको बताएका छन् । उक्त हमलाको जिम्मेवारी पाकिस्तानको आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मदले लिएको थियो । इमरान ख़ानले भनेका छन्, पहिलो कुरा बिना प्रमाण आरोप लगाइयो । साउदीका राजकुमारको पाकिस्तान भ्रमण महत्ववपूर्ण थियो । पाकिस्तान..
Results 349: You are at page7of 12